OLA Tv Pro Apk Dhawunirodha Android - Luso Gamer
Oudi Tv Pro Apk Download For Android
Dai 11, 2021 March 26, 2021 by Shweta Nzira
Ini ndinogona kufungidzira kuti mangani mapurogiramu epaTV anodikanwa kuvanhu nekuti iwo akakosha masosi evaraidzo mazuva ano. Naizvozvo, ndauya neiyi "OLA Tv Pro Apk" ?? yenharembozha dzeApple pane ino webhusaiti.
lusogamer gara uchiedza kufadza vatariri vayo nekuunza zvakasarudzika uye zvinoshanda zvinoshandiswa. Saka, unogona kudhawunirodha yazvino Apk faira yeapp kubva ichi chinyorwa. Muchinyorwa chanhasi, hausi kuzotora software chete asi zvakare unogona kuwana ruzivo rwese nezve izvo.
Kana iwe uchiifarira uye iwe uchifunga kuti iri kuvaraidza saka usakanganwa kuigovana neshamwari dzako.
Nezve OLA Tv Pro
Ola Tv Pro Apk ipuratifomu iyo inokupa iwe zviuru zveterevhizheni chiteshi. Nekudaro, ndiwo marongero aungaita ako ese aunofarira terevhizheni, mafirimu, nhau, zvemitambo, uye zvimwe zvirongwa zvakawanda pane ako mafoni.
Ichi chishandiso chinowira muchikamu chekushambadzira nekutepfenyura.
Sezvo iwe uchiziva kuti hazvigoneke kuendesa terevhizheni yako seti kwese kwese newe saka, vanhu vanosarudza mafoni mafoni kutenderera. Nekuti aya marudzi emidziyo ari nyore kutakura uye kutarisa al zvinhu zvako zvaunofarira.
Iyo ine anopfuura zviuru gumi gumi IPTV chiteshi kubva pasirese pasirese. Zvakare, yese masevhisi ayo akasununguka zvachose kuti awane uye hapana mari yekubhadharisa kana chero chimwe chinhu. Iwe unongoda kuisa iyo, vhura iyo uye ndizvo zvazviri.
Iwe unoziva kuti kuti utarise kuwanda kwakadai kwematanho iwe unofanirwa kuwana tambo yekubatanidza kana iwe unoda yakabhadharwa dhishi maTV. Asi pano iyo kesi yakasiyana sezvo iwe uchigona kushandisa zvese zvemahara ne HD mhando vhidhiyo. Dzimwe nguva iwe unogona kunge wakamboona iwo makwara kubva kune tambo kana ndiro anopa yakaderera-mhando mifananidzo.
Naizvozvo, ndinokukurudzira kuti ushandise mafoni ako netafura seterevhizheni yako. Zvino, tora iyo OLA TV Pro Apk kurodha pasi yazvino vhezheni, uye kuiisa pane ako mafoni wozoona mashiripiti ekushandisa.
Iwe unogona zvakare kurodha OLA Tv ye firestick, maPC kana malaptop. Asi iwe uchafanirwa kuisa emulator pane yako PC kana palaptop kana iwe uri kuyedza kuisa Apk faira. Nekudaro, yeFirestick, iwe haudi yakadaro yekuwedzera faira.
Nekudaro, ingo tora iyo Apk faira uise iyo zvakananga paunenge uchiisa mamwe maAPK pachigadzirwa ichocho.
zita OLA TV Pro
zera 10.94 MB
Package Zita com.olaolatv.iptvworld
Inodiwa Android 4.1 uye kumusoro
Maitiro ekuisa OLA TV Pro Apk?
Ini ndinofunga handidi kukuudza izvozvo kubva kwaunogona kurodha pasi iyo app asi ini ndinogona kukuudza nezve iyo yekumisikidza. Nekuti kana iwe uri pane ino peji saka ndine chokwadi chekuti ungazviwana sei kune ako maApple.
Asi dzimwe nguva vanhu vanotarisana nenyaya mukumisikidza maitiro. Naizvozvo, ini ndakaedza kutsanangura maitiro aya mudanho nedanho gwara. Nekudaro, ini ndinokurudzira iwe kuti utevere nhanho imwe neimwe imwe.
Chekutanga pane zvese, enda kumagumo eiyo peji wobva wadzvanya pane iro bhatani.
Zvino, mirira kwemaminetsi mashoma sezvo kurodha pasi kuchapedza mumaminetsi mashoma kana iwe uine yakagadzikana internet kubatana.
Zvino kana iwe uchinge wapedza enda kumisarudzo sarudzo yemafoni ako.
Vhura masese kuchengetedzwa.
Vhara iyo seti uye dzokera kumba skrini.
Vhura faira rekutsvagisa faira uye tsvaga iyo dhairekitori pawakakopa iyo Apk.
Paunowana iyo Apk inodzvanya pairi kana kuitepa.
Ipapo iwe unowana mukana we "stInstall '.
Tinya / tinya pane iro bhatani bhatani uye mirira kwemaminitsi mashanu kusvika gumi.
Vhura iko kunyorera uye unakirwe matani emamwe mafirimu anoshamisa, zvinoratidzwa, akateedzana, uye zvimwe zvirongwa.
Unogona kufarira kushandisa iyi inotevera app
OLA TV Pro Apk inokupa iwe yakawanda yezvinonakidza maficha uye mabhenefiti. Ndinovimba muri kuzovafarira pamafoni enyu efoni. Kana iwe uchida kuzvionera wega wobva wasvetuka chikamu ichi uye enda wakananga kubhatani rinowanikwa kumagumo wobva wadzvanya pairi.
Ipapo iyo Apk ichatanga kuchengeta kune ako mafaera. Nekudaro, kana iwe uchida kuziva izvo maficha saka unogona kuzvitarisa pano pazasi.
Kune zviuru zvematanho ekuyerera mhenyu.
Iwe unogona kuwana zvese zvirimo mune yakakwira tsananguro vhidhiyo uye odhiyo.
Hapana kudiwa kwechero kunyoreswa, kunyoreswa kana mhosva nekuti zvese ndezvemahara.
Iwe unogona kuve nyore uye nyore kufamba kuti uwane zvinhu zvako zvaunoda nekukurumidza.
Iyo interface uye marongero ari nyore uye anoshandiswa-mushandisi saka chero munhu anogona kuishandisa zviri nyore.
Ikoko iwe une yakavakirwa-mukati mutambi asi iwe unogona kusarudza vamwe vatambi futi.
Zvemukati kurongedzwa zvinoshamisa uye iwe unogona kuwana zviri nyore zvaunoda.
Inokupa iwe sarudzo yekuwana zviteshi nenyika dzadzo.
Tarisa nhau dzine chekuita nemitambo pamwe nemitambo mhenyu uye makwikwi.
Iyo haina ads kuitira kuti iwe ugone kunakidzwa pasina chero kukanganiswa nekutsamwisa pop-up kushambadzira.
Iko hakuna zvakavanzika zvakabhadharwa maficha.
Iwe unogona kuwana uye kuongorora zvimwe kubva kune ino imwe uye inoshamisa app.
Izvi zvese zvaive pamusoro peapp iyo iri kukupa iwe kutepfenyura mhenyu terevhizheni chiteshi pane yako Android nhare mbozha pamwe neFirestick nemaPC kana maLaptops. Sezvo ini ndati iwe unofanirwa kuisa emulator inomhanya Android software paWindows PC uye malaptop ekumhanyisa iyi Apk.
Asi Firestick kana maAmazon Smart TV ane iyo Android Inoshanda Sisitimu, nokudaro, iwe unogona kuiisa zvakananga pane izvo zvishandiso. Saka, kana iwe uchida kudhawunirodha yazvino vhezheni yeOLA Tv Pro Apk yeApple yako wobva wadzvanya pazasi bhatani.
Categories Entertainment Tags OLA Tv Pro, OLA Tv Pro Apk, OLA Tv Pro App Post navigation
Yekupedzisira Yekufungidzira VIII Ye Android & iOS yave kuwanikwa